Tartanka NAAFADA oo lagu qabtay Gaalkacyo [Sawirro] – Gool FM
Tartanka NAAFADA oo lagu qabtay Gaalkacyo [Sawirro]
Kaafi October 7, 2016
(Gaalkacyo) 07 Okt 2016. Magaalada Gaalkacyo waxaa arbacadii lagu qabtay Tartan orad ah oo loo qabtay Dadka Naafada ah ee ku socda Baaskiilada Naafada.
Tartankan waxaa soo qaban qaabiyay Ururka Naafada Galmudug oo Gacan ka helay Ururka Aid Disabled ee fadhigiisu yahay Dalka Sweden,waxaana Tartamayaashu ay ka kala socdeen Afarta Xaafadood ee Magaalada Gaalkacyo waxayna ku tartamayeen 100 Mitir.
Jidka 30-ka Ama Bile Rafle oo ku yaala Bartamaha Magaalada ayaa lagu qabtay Tartankan waxaana u soo daawasho tagay Boqolaal Qof oo ay u ahayd markii ugu horaysay ee ay arkaan Tartan noocaan oo kale ku arkaan Gaalkacyo.
Dadweynihii ka soo qayb-galayDaawashada Tartanka ayaa u kala sacab tumayay Tartamayaasha waxaana Jidka uu tartanka shalay ka socday Amaankiisa sugayay Ciidamada Galmudug.
Tartanka waxaa ku guulaystay Cabdi Mahad Maxamed oo matalayay Xaafada Garsoor,halka uu kaalinta 2aad uu galay Cabdirisaaq Axmed oo ka socday Xaafada Howlwadaag, waxaana la filayaa in Cabdi Mahad Maxamed uu dhawaan ka qayb-gali doono Tartanka Naafada Galmudug oo dhawaan ka furmi doona Magaalada Cadaado.
Feysal Mursal Xasan oo ah Madaxa Dhaqaalaha Gobalka Mudug Ururka Aid Disabled oo Goolfm la hadlay ayaa sheegay in qabashada Tartankan ay tahay sidii ay u dhiiri galin lahaayeen Dadka Naafada ah,wuxuu intaas ku daray in Tartamo noocaan oo kale ah ay Deegaano badan ay ka qaban doonaan.
Waa markii ugu horaysay ee tartanka Naafada lagu qabto Magaalada Gaalkacyo,waxaana Tartanka uu noqday midka ugu hadal haynta badan Magaalada Gaalkacyo Xalay ilaa Maanta iyadoo Dadka lixaadkoodu aanu dhamayn ay aad ugu riyaaqeen in Tartan loo qabto.
W/D: Burhaan Cabdulaahi Xaashi Gaalkacyo
Manchester United oo Pogba ku soo dabeeysa Griezmann
Gaadiidka iyo Gantaalaha Afgooye oo galabta ku ballansan garoonka Koonis